Sprout Social: Wedzera Kubatanidzwa muSocial Media Neiyi Publishing, Kuteerera, uye Advocacy Platform | Martech Zone
Wakambotevera mubatanidzwa hombe pamhepo kungoodzwa mwoyo nemhando yezvavari kugovera kana kushomeka kwekubatana kwavanoita nevateereri vavo? Icho chiratidzo chekutaura, semuenzaniso, kuona kambani ine makumi ezviuru zvevashandi uye angori mashoma mashoma kana zvaanoda pane izvo zvirimo. Hufakazi hwekuti havasikungoteerera kana kudada nezvirimo zvavanenge vachisimudzira.
Magiya ezvinyorwa zvesocial media Kubudisa haifanire kunge iri magiya zvachose. Sezvo waisazopinda muchiitiko chetiweki, tambidza makadhi ako kumunhu wese, uye kubuda usina kumbotaura nemunhu, haufanirwe kuzviita pasocial media kana. Midhiya yemagariro inzira inonakidza yekuti makambani adzidze izvo vateereri vavo vane hanya nazvo, kugovana ruzivo rwakakosha, uye kukura kunotevera kwetarisiro uye vatengi vanoziva kuti mhando ine hanya navo zvechokwadi.
Chokwadi, izvi zvinoda kushanda nesimba. Kugadzirisa kuvepo kwesocial media pamapuratifomu kunogona kunetesa - saka kutsvaga chikuva chinogona kukubatsira kwakakosha.
Kubura Social Media Management
Kukura Kwemagariro mutungamiriri anozivikanwa muusability, rutsigiro rwevatengi uye kugutsikana, ROI uye kutorwa kwemushandisi, sekupihwa nepamusoro-tier software yekuongorora masaiti. Ivo vane anopfuura zviuru makumi matatu emhando uye masangano eese saizi vachishandisa chikuva chavo.
Yavo-in-one social media manejimendi chikuva inogonesa mabhureki kuvhura mukana wakazara wesocial media kuti vashandure yavo yesocial media marketing, social customer service, pamwe nekuvaka kuzivisa pamhepo vachishandisa vashandi nevapesvedzera. Iyo platform ine zvinotevera zvakakosha maficha:
Zvemagariro Midhiya Kuteerera - nzwisisa vateereri vako, vhura mafambiro, uye uwane zvinobatika kubva pasocial data kuzivisa yako brand uye bhizinesi zano.
Social Media Kuburitsa - kuronga, kuronga, kuronga uye kuendesa zvirimo sechikwata chine muchinjika-network social publishing.
Zvemagariro Midhiya Kubatanidzwa - gadzirisa kutarisisa magariro uye kunatsiridza kupindura neinbox yakabatana kuita nenharaunda yako pamapuratifomu enhau.
Yemagariro Media Ongororo - dhiraivha kuita sarudzo mubhizinesi nehupfumi hwemagariro data uye dashboard.
Social Media Advocacy -vaka mhando yako pamhepo nekupa vashandi vako nzira iri nyore yekugovera zvakavharwa zvemukati pamasocial network.
Kunyangwe iwe uri maneja wesocial media, mushambadziri wesocial media, mumiriri wekuchengeta vatengi vesocial media, muongorori, kana nyanzvi - Kukura Kwemagariro inopa ese maturusi aunoda kuvaka, otomatiki, uye optimize yako social media yekushambadzira zano.
Tanga Yako Yemahara Yekumera Yemagariro Muedzo
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Kukura Kwemagariro uye ndiri kushandisa yangu affiliate link mukati meiyi post.
Tags: kutarisana nevanhuevanhu vezvenhausocial media kukurudziramagariro enhau analyticssocial media kalendarisocial media competitive intelligencekubatana kwenhaupasocial media kuteereraSocial Media Marketingpasocial media kutsikisabukira munzanganhungirwa
Movavi: Vhidhiyo Kugadziridza Suite YeBhizinesi Diki Kugadzira Mavhidhiyo Ehunyanzvi